Khilaafkii SACIID DENI iyo Axmed Karaash oo la xaliyey - Maxaa lagu heshiiyey? - Caasimada Online
Home Warar Khilaafkii SACIID DENI iyo Axmed Karaash oo la xaliyey – Maxaa lagu...
Khilaafkii SACIID DENI iyo Axmed Karaash oo la xaliyey – Maxaa lagu heshiiyey?
Garoowe (Caasimada Online) – Khilaafkii u dhaxeeyey madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Karaash ayaa lagu guuleystay in la xaliyo, sida lagu sheegay war kasoo baxay madaxtooyada Puntland.
Khilaafka ayaa waxaa xalintiisa ku guuleystay qaar ka mid ah Isimada Puntland iyo guddoonka baarlamanka, oo maalmihii u dambeeyay ku howlanaa dhex-dhexaadinta Deni iyo Karaash.
“Dowladdu waxay Bulshada Puntland ugu baaqaysaa inay ka shaqeeyaan dowladdnimada, meel ugasoo wadajeestaan cadowga, iskana ilaaliyaan waxkasta oo khalkhalgelinaya nidaamka, amniga iyo jiritaanka Puntland.”